Canon ၏ Irista | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Canon ၏ Irista
Canon ၏ Irista APK ကို
Irista ကို Canon ၏ cloud သိုလှောင်မှုနဲ့ဓာတ်ပုံကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းများ, တက်ဘလက်များနှင့် web ပေါ်မှာရရှိနိုင်ကြှနျုပျတို့သိုလှောင်မှုအခမဲ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး 15GB အတူပါပေးဖို့အားလုံးကိုဓာတ်ပုံဆရာကြိုဆိုပါတယ်။ လုံခြုံစွာ၎င်းတို့၏မူလပုံစံ, သင့်ပုံရိပ်တွေကိုသင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ကြသည်မျှဝေဖို့အဆင်သင့်, ပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသိမ်းဆည်းထား။ Irista လွယ်ကူသောအပ်လုဒ်ကိုအတွက်လည်းအားလုံးကြိုးမဲ့ကို Canon ကင်မရာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကိုသင်အပ်လုဒ်တင်ပြီးအဖြစ်•သင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအမြဲရရှိနိုင်ပါ - လုံခြုံစွာမျှအပေးအယူအတူတက်ကျောထောက်နောက်ခံ။ ငါတို့သည်လည်းအများဆုံးထုတ်လုပ်သူ RAW file တွေကိုထောက်ခံပါတယ်။
သငျသညျဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုများများနှင့်အတူစတင်ရန်•လုံလောက်အခမဲ့သိုလှောင်မှု။ သငျသညျအာကာသထဲက run ပါလျှင်, Irista သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်သိုလှောင်မှုအစီအစဉ်တွေပေးထားပါတယ်။
•ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ထပ်တူများကိုစစ်ဆေးသည် :) ။
•သင့်စုဆောင်းမှုအတွက်အားလုံးပုံရိပ်တွေ default အနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း - သင်မည်ကဲ့သို့မျှဝေချင်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်။
•သင့်ဓါတ်ပုံကိုစုစည်းဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်နှင့် tags များနှင့်အတူစည်းရုံး။ လျင်မြန်စွာသငျသညျအစာရှောငျသငျ့ရဲ့စာကြည့်တိုက် scrolling သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေရေး tools များ အသုံးပြု. ရှာနေကြောင့်ဓာတ်ပုံကိုရှာပါ။
•တစ်ဦးက desktop ပေါ်မှာအပ်လုဒ်ကိရိယာ utility ကိုအလိုအလျှောက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲများအနေဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုတင်သွင်းဖို့ Windows နှင့် MacOS များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
•ကြီးတွေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုခံစားဖို့ Apple က TV အက်ပ်အဖြစ်ဒါ့အပြင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
•အဘယ်သူမျှမ 3rd ပါတီကြော်ငြာများ။
ကျနော်တို့ကို Canon ပင်ပိုကောင်း irista စေနိုင်ရန်အတွက်ဥစ္စာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုဖတ်ပါ။ သင်ဤ update ကိုချစ်ကြလျှင်, ပြန်လည်သုံးသပ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့ကျေးဇူးပြုပြီး!
အမြဲအဖြစ်, သင်တိုးတက်လာဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှိပါကသင်သည် support@irista.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Canon ၏ Irista
37.05 ကို MB
Canon ၏ယူရိုပါလိဂ် NV
Canon ၏တူထု Inkjet / SELPHY